Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Mmụba okporo ụzọ maka ọdụ ụgbọ elu FRAPORT
Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Mgbasa Ozi • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Na nke mbụ kemgbe ntiwapụ nke ọrịa coronavirus, Fraport rụpụtara nsonaazụ otu dị mma (uru ụgbụ) na oge mkpesa - na -akwado ịrị elu na mbelata ọnụ ahịa, yana ịkwụ ụgwọ akwụ ụgwọ ọrịa site n'aka gọọmentị.
Akụkọ mkpụmkpụ Fraport Group - Ọkara nke mbụ 2021:
Na ọkara mbụ nke 2021, okporo ụzọ na -alaghachi nke ọma na ọdụ ụgbọ elu FRAPORT/
Nọmba ndị njem na-ebili n'oge oge njem ọkọchị-Ọnụ ego belatara nke ukwuu-Fraport na-enweta nsonaazụ otu dị mma n'ihi nsonaazụ otu
Ọrịa Covid-19 na-aga n'ihu na-emetụta arụmọrụ azụmahịa nke ụlọ ọrụ ọdụ ụgbọ elu ụwa Fraport n'ime ọnwa isii mbụ nke 2021. Na-eso ụzọ nkeji mbụ na-esighị ike, ọnụ ọgụgụ okporo ụzọ pụtara nke ọma na nkeji nke abụọ nke 2021 n'ofe niile nke otu. ọdụ ụgbọ elu ụwa niile.
Onye isi Fraport AG, Dr. Stefan Schulte, kwuru, sị: “Ego nkwụghachi ụgwọ ọrịa sitere n'aka gọọmentị German na Steeti Hesse na -ewusi ntọala ego anyị ike. Nke a na -enyere anyị aka ịga n'ihu itinye ego na nchekwa ihu igwe na ọrụ mmepe akụrụngwa. N'otu oge ahụ, anyị belatara ọnụ ahịa anyị. N'ihi nke a, nsonaazụ ọrụ anyị abịaghachila ọzọ na oji. Ọzọkwa ekele maka Pọtụfoliyo ọdụ ụgbọ elu anyị sara mbara ma dị iche iche, Fraport Group nọ n'ọnọdụ dị mma iji rite uru na mgbake a tụrụ anya na njem ụgbọ elu. ”
Njem ndị njem na -alaghachi nke ọma
N'ọnwa June 2021, ọnụ ọgụgụ ndị njem na ọdụ ụgbọ elu Fraport Frankfurt (FRA) gbaghachiri nke ọma-na-arị elu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 200 n'afọ ọ bụla ruo ihe dị ka nde ndị njem 1.8. Ọnụ ọgụgụ mbido na -egosi na omume a gara n'ihu na July, ebe okporo ụzọ na -eto site na ihe dị ka pasent 116 ruo ihe dị ka nde ndị njem nde 2.8. Okporo ụzọ ndị njem FRA n'ụbọchị kachasị elu na-eru ugbu a ihe dị ka pasent 50 nke ọkwa edebanyere n'afọ ndekọ ndekọ ọrịa tupu afọ 2019.
N'izo aka na mmetụta mmụba okporo ụzọ na ebili na arụ ọrụ ọdụ ụgbọ elu, CEO Schulte kọwara: “Mmụba dị ukwuu nke okporo ụzọ na -ebute nsogbu ọdụ ụgbọ elu maka ọdụ ụgbọ elu Frankfurt, n'ihi na okporo ụzọ na -etinyekarị uche n'oge ọtụtụ oge n'ụbọchị. Na mgbakwunye, usoro mgbochi Covid ugbu a chọrọ oge na akụrụngwa dị ukwuu maka usoro ọdụ ụgbọ elu na arụmọrụ njikwa ala. Anyị na ndị mmekọ anyị na -arụkọ ọrụ ọnụ, anyị na -akwalite usoro mgbe niile, ebe anyị na -eme ka ikike anyị kwekọọ na mgbanwe nke ihe a na -achọ. ”
N'agbanyeghị ọnọdụ dị mma a hụrụ n'ime izu ole na ole gara aga, FRA ka debara aha mbelata okporo ụzọ nke pasent 46.6 kwa afọ ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 6.5 maka oge Jenụwarị ruo June 2021. Nke a bụ n'ihi na, n'ime otu ọnwa isii nke afọ gara aga, ọrịa Covid-19 malitere inwe mmetụta na-adịghị mma na okporo ụzọ site na etiti Machị 2020 gaa n'ihu. Tụnyere ọnụ ọgụgụ ndekọ e nwetara na ọkara mbụ nke ọrịa na-efe efe nke 2019, FRA debara aha mbelata pasent 80.7 na ọkara mbụ nke 2021. N'ụzọ dị iche, mbupu ụgbọ elu Frankfurt Airport (airfreight + airmail) toro site na pasent 27.3 n'ime afọ gara aga. -ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde tọn metric 1.2 site na Jenụwarị ruo June 2021 (ihe ruru pasent 9.0 ma e jiri ya tụnyere otu oge na 2019). Na ọdụ ụgbọ elu Fraport Group zuru ụwa ọnụ, okporo ụzọ toro nke ọma na June 2021, mana okporo ụzọ maka ọkara mbụ ka dị n'okpuru ọkwa afọ gara aga.
Ego mbata na-ebelata ntakịrị-Mmetụta dị mma n'otu oge site na ịkwụ ụgwọ gọọmentị
N'ịtụgharị uche na mmepe okporo ụzọ, Fraport's Group revenue belatara site na 10.9 pasent ruo nde 810.9 na ọkara mbụ nke 2021. Ịgbanwe maka ego sitere na nrụpụta metụtara mmefu ego isi ike na ndị enyemaka Fraport n'ụwa niile (dabere na IFRIC 12), ego otu na -agbada gbadara 8.9. bụ to 722.8 nde. Nkwekọrịta nke gọọmentị German na Steeti Hesse metụtara Fraport '' nke ọma '' maka inye Fraport ụgwọ maka idobe njikere ọrụ FRA n'oge mkpọchi coronavirus mbụ na 2020. Ego nkwụghachi ụgwọ zuru ezu nke € 159.8 nde nwere mmetụta dabara adaba na Otu EBITDA. Fraport na -atụ anya ịnata ụgwọ ahụ n'ọkara nke abụọ nke 2021. Ego mbata ego a ga -enwezi mmetụta dị mma na mwepụ nke otu na ụgwọ ego akwụmụgwọ.
Ọzọkwa ụlọ omebe iwu Gris kwadoro ịkwụ ụgwọ Fraport (n'okpuru nkwekọrịta nkwekọrịta) maka mfu arụmọrụ mebiri na 2020 n'ọdụ ụgbọ elu Greek nke otu 14 n'ihi ọrịa na -efe efe. Kpọtụrụ, Steeti Gris kwetara ịhapụ ụgwọ nkwụnye ego akwụgoro maka Fraport, dabere na ego ndị njem nwetara. Ọzọkwa, enyere Fraport ikike nkwụsịtụ nwa oge nke ịkwụ ụgwọ ego ngbanwe mgbanwe. Maka ọkara mbụ nke 2021, a tụgharịrị nke a na mmetụta dị mma nke million 69.7 nde na ego ọrụ Fraport na Group EBITDA.
Na mgbakwunye, nkwekọrịta ruru na nkeji iri na ise mbụ nke 2021 n'etiti Fraport na ndị uwe ojii Federal German (Bundespolizei) na nkwụghachi ụgwọ nke ọrụ nchekwa ụgbọ elu - nke Fraport nyere n'oge gara aga - nwetara ego ruru nde .57.8 XNUMX, nke were otu ego ahụ metụta Group EBITDA.
Ego mmefu belatara nke ukwuu - arụpụtara nsonaazụ Positive Group
N'ihi oke okporo ụzọ na-arị elu n'oge na-adịbeghị anya, Fraport belatara ọrụ nwa oge maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt (ewepụtara n'okpuru Germany Ọrụ nwa oge mmemme maka ọrịa na -efe efe). Akwụsịla akụrụngwa akụrụngwa ọdụ ụgbọ elu nwa oge n'ihi ọrịa na -efe efe amaliteghachila ọrụ - gụnyere njedebe FRA 2. N'agbanyeghị usoro ndị a na -adịbeghị anya, Fraport ka nwere ike belata mmefu mmefu ọrụ na Frankfurt site na njikwa ọnụ ahịa ihe dị ka pasent 18 na ọkara mbụ nke 2021. N'ụlọ ọrụ Fraport jikọtara ọnụ zuru ụwa ọnụ, mmefu mmefu belatara ihe dịka pasentị iri na asaa n'oge mkpesa.
Nkwado site na otu mmetụta site na ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ, Group EBITDA ruru nde 335.3 22.6, karịa ọkara mbụ EBITDA nke nde .312.7 2021 site na nde XNUMX. Ewezuga mmetụta pụrụ iche ndị a pụrụ iche, otu a ka rụpụtara nsonaazụ dị mma na ọkara mbụ nke XNUMX.
Otu EBIT ruru nde 116.1 210.2 na oge mkpesa, site na mwepu € 2020 na ọkara mbụ nke 96.2. Nsonaazụ ego nke mwepu € 1 nde ka fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọkara oge mbụ n'afọ gara aga (H2020/98.7: mwepu € 35 nde). Ọ bụ ezie na nsonaazụ ego ritere uru site na ntinye dị mma nke million 37 nde sitere na ụlọ ọrụ jikọtara ọnụ na-hara nhatanha, nke a enweghị ike iwepu rise XNUMX nde ịrị elu na mmefu ọmụrụ nwa n'ihi mmụba ego.
Otu EBT gbalitere ruo € 19.9 nde na ọkara mbụ nke 2021 (H1/2020: mwepu € 308.9 nde). Nsonaazụ otu ma ọ bụ uru ụgbụ rịrị ruo nde euro 15.4 (H1/2020: mwepu € 231.4 nde).
Site na ngwụcha ọkara mbụ nke 2021, ndị isi Fraport ka na-atụ anya na njem ndị njem n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt ga-adị site na ihe na-erughị nde 20 ruo nde 25 maka afọ zuru ezu 2021. N'ikwekọ n'echiche gara aga, ọdụ ụgbọ elu Group dị na Fraport mba ụwa. Pọtụfoliyo na -atụ anya ịhụ mgbake okporo ụzọ dị ike karịa Frankfurt. A na -atụkwa anya na ego otu ga -eru ihe ruru ijeri euro abụọ na 2.
Ego ịkwụ ụgwọ maka ọrịa na -efe efe nke ihe dị ka nde euro 160 nke gọọmentị German na Steeti Hesse nyere n'oge na -adịghị etinyeghị n'echiche gara aga. Gụnyere mmetụta a, ndị isi ụlọ ọrụ na -atụ anya ugbu a Group EBITDA maka afọ ahụ niile ga -adị n'etiti nde € 460 ruo € 610 nde (edegharịrị site na ihe dị ka nde € 300 ruo € 450 nde, dị ka amụma na Fraport si Akụkọ Afọ 2020). Nkwụghachi ụgwọ ahụ ga -enwekwa mmetụta dị mma na Group EBIT, nke a na -atụ anya na ọ ga -adịcha njọ mana a na -ebu amụma na ọ ga -erute n'ókèala dị mma. Amụma gara aga na ọ ga -adị njọ, nsonaazụ otu a (uru ụgbụ) ugbu a na -atụ anya na ọ ga -adị site na ntakịrị ihe na -adịghị mma.